'Scream' Trailer ndeye Kudzoka Kunoshamisa kune iyo Slasher Franchise - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau 'Scream' Trailer ndeye Kudzoka Kunoshamisa kune iyo Slasher Franchise
'Scream' Trailer ndeye Kudzoka Kunoshamisa kune iyo Slasher Franchise
Ndichange Ndichidzoka ....
by Trey Hilburn III October 12, 2021
by Trey Hilburn III October 12, 2021 18,301 maonero
Chii chaunofarira chinotyisa bhaisikopo? Ingangove iri nyowani mhere Chemhere. Wechishanu mufranchise ndewekutanga pasina Wes Craven ari muchikepe, asi anonyanya kukudza iye mugadziri wemufirimu… uye zvinoratidza.
Zvinotaridza kuti maDirector, Matt Bettinelli-Olpin naTyler Gillett ndivo vakomana vakarurama pabasa rekuisa Danidzira dzoka netsoka dzayo. Firimu ravo Ready kana Not kwaive kuputika uye magirazi akawanda akafanana simba ratinoona mune teaser.
Tichine imwe nzira yekuenda kusvika kuburitswa kwefirimu (Ndira 2022), asi ichi chidiki chidiki che Danidzira kutitenderedza pamusoro. Inopa mafeni chaizvo zvavanoda kuti vatasve kunze kwasara rwendo.
Mutsara we Danidzira inoenda seizvi:
"Firimu rinotevera nyaya yemukadzi wechidiki anodzokera kumusha kwake kwekare, achingosangana nemhosva dzinotyisa dzekuuraya dzakabatana nemhondi yakavanzika."
Iwe unofungei nezve Danidzira teaser? Iwe unofara nezve izvo iwe zvawakaona? Uri kunakidzwa negwara here? Tiudze pane yedu Facebook uye Twitter chikamu chemashoko.
Danidzira inobaya nzira yayo kupinda mumitambo muna Ndira 14, 2022.